Antonio Conte oo ku amray maamulka Inter inay lasoo saxiixdaan xiddigiisii hore ee kooxda Chelsea – Gool FM
(Milan) 08 Dis 2019. Shabakada “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in macalinka Inter Milan ee Antonio Conte uu xiiseenayo lasoo saxiixashada daafaca reer Spain iyo kooxda Chelsea Marcos Alonso.
28 jirkan reer Spain ayaa lala xiriirinayaa ka tagista kooxda reer England ee Chelsea suuqa xagaaga ee soo socda.
Waxaa jira kooxo badan waaweyn ee ka dhisan qaaradaYurub, kuwaasoo raadinaya saxiixa Marcos Alonso, waxaana hoggaaminaya Inter Milan, Atletico Madrid iyo Barcelona.
Sida laga soo xigtay shabakadda “CalcioMercato” Antonio Conte ayaa wuxuu amar ku siiyay gudiga sarre ee maamulka kooxda Inter Milan inay lasoo saxiixdaan Marcos Alonso, maadaama uu u arko inuu ku habuun yahay buuxinta booska uu ka maqan yahay Asamoah kaasoo aan si buuxda uga soo kabsan dhaawaciisa.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Antonio Conte uu xiiseenayo inuu ku guuleysto helida adeega Marcos Alonso, maadaama ay horey ugu soo wada shaqeeyeen kooxda reer London ee Chelsea.